प’त्याउनु हुन्न होला तर केटीहरुले नु’हाउँदा खेरि यस्ता कुराहरु सो’च्छन ! – Life Nepali
प’त्याउनु हुन्न होला तर केटीहरुले नु’हाउँदा खेरि यस्ता कुराहरु सो’च्छन !
यु’वतीहरुलाई आफू नु’हाउदै गर्दा पनि विभिन्न खालको चि’न्ताले स’ताउने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरुले नु’हाउदा आफ्नाे श’रीर र कपालको बारेमा चि’न्ता गर्छन् । यस बाहेक उनीहरु बाथरुमभित्र आफैसँग छि’ल्लिने गरेको समेत अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । केटीहरू अक्सर सम्बन्धबारे चि’न्तित रहन्छन् । उनीहरू सधैं दिगो सम्बन्धको खोजीमा हुन्छन् । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
त्यसैले उनीहरू अक्सर हाम्रो स’म्बन्ध कत्तिको टि’काउ हुनेछ ? के हामी सधैं यस्तै गरेर खुसी रहन सकौंला ? आदि सोचमा हराउने गर्दछन् ।केटीहरू आफ्नो कपालबारे पनि चि’न्ता गर्ने गर्दछन् । नुहाउँदा केही कपाल झर्नु सामान्य कुरा हो तर केटीहरू भने यसबारे केही बढी नै ग’म्भीर भइदिने गर्दछन् । त्यति मात्र होइन उनीहरू नुहाउँदा विभिन्न हेयरस्टाइल कस्तो लाग्दो रहेछ भनेर ऐनामा समेत हेर्ने गर्दछन् ।
नुहा’उँदा केटीहरू चि’न्तित हुने अर्को विषय हो मोटोपना । अक्सर केटीहरू बा’थरू’मभित्र आफ्नो न’ग्न शरीर हेरेर आफ्नो फि’गरबारे चि’न्तित हुने गर्दछिन् । उनीहरूलाई त्यसबेला आफू मोटी भएको र अब शा’रीरिक व्यायाम थाल्नुपर्ने लाग्ने गर्दछ । केटीहरूले बाथरूममा आफ्नो प्रेमीको कल्पना समेत गर्ने गरेको बुझिएको छ । त्यति मात्र होइन प्रेमी भएका केटीहरू ।
आफ्नो प्रेमीबारे सोचेर ल’जाउने उसले गरेका प्रशंसाहरू सोचेर खुसी समेत गरेको थाहा हुन आएको छ । केटीहरूले नु’हाउँदा आफ्नो फिगर, सुन्दरताबारे त चि’न्तित हुन्छन नै त्यसका साथै उनीहरूलाई आफूले नु’हाउँदा धेरै समय लगाएको र मानिसहरूले के भ’न्लान् भनेर समेत चि’न्तित हुने गर्दछन् । एजेन्सी । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous यी चार राशी भएका पुरुषहरु श्रीमती र प्रेमिकालाई अत्याधिक माया गर्छन !
Next टिकटकमा यस्तो ह’र्कत गरेपछि , यी युवतीलाई ३ बर्ष जे’ल र २२ लाख रुपैया ज’रिवाना ! ( भिडियो हेर्नुहोस )